6-Da Augosto Markii Shabaab Banaadir ay Faarujiyeen | Gedoonline
6-Da Augosto Markii Shabaab Banaadir ay Faarujiyeen	Added by Editor on August 6, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Sanad ka hor Maanta oo kale ayaa Shabaab waxa ay iskaga baxeen inta badan degmooyinkii ay kaga sugnayeen Magaaladda Muqdisho.
Ka bixitaanka Shabaab ee Gobbolka Banaadir ayaa ka danbeysay ka dib markii cadaadis militiri ay kala kulmeen Dowladda KMG Soomaaliya iyo AMISOM.
Gudoomiyaha Shabaab ee gobbolka Banaadir ayaa marka ay shabaab ka baxeen Degmooyinka gobbolka Banaadi waxa uu uu sheegay in ay arintaasi ahayd mid Militiri.
Dowladda KMG Soomaaliya ayaa markii ay shabaab ka baxeen Degmooyinka gobbolka Banadir waxa ay qaaday talaabooyin ay ku doonayaan inay isku fidiyaan gobboladda Dalka Soomaaliya.
Dad Badan ayaa qabay in haddii Shabaab ay ka baxeen Degmooyinka gobbolka Banaadir ay suurtagal noqon kartay in gobboladdana ay baneeyaan.
Ciidamadda AMISOM iyo Dowladda ayaa sanad ka dib waxa ay u suurtagashay inay gaaraan deegaano ka tirsan gobboladda dalka sida shabeelooyinka.
Qorshaha Shabaab ay kaga baxeen sanad ka hor Magaladdda Muqdisho ayaa waxa dejiyey Xukuumadda Maxamed Cabddulaahi Farmaajo.
Xaamud: Shabaab ha isaga baxaan gobboladda
Barakacyaal isugu soo baxay Banaadir
Abuu C/raxman: AMISOM ayaan qarxinay
Shabaab oo ka sii baxaya Shabeelaha hoose
Hay’adda Elman & Maamulka G/Banaadir Oo Si Isku Mid ah u Cambareyey Duqeynta
One Response to 6-Da Augosto Markii Shabaab Banaadir ay Faarujiyeen	Wiil waamo August 6, 2012 at 4:15 am	Erayga Faarujiyeen ma aha Eray Daarood waa eray ay badaleeen Abgaalka iyo reer Xamarka, erayga saxda ah waa ” Faaruqiyeen”